I-rosari engcwele ngoLwesine Discover ➡️ Discover Online Online ➡️
Kukho iimfihlakalo ezintlanu, enye yazo ngu Iimfihlakalo eziqaqambileyoEzi zingathandazwa kuphela ngoLwesine. Ukuba ufuna ukwazi ukuba kutheni kwaye yeyiphi imithandazo ekufuneka yenziwe? sicebisa ukuba ufunde inqaku lethu Ingcwele yeRosari NgoLwesine kude kubezekupheleni.
1 Yintoni iRosari eNgcwele ngoLwesine?
2 Zithini iimfihlakalo ezikhanyayo?
2.1 Zithandazwa nini iimfihlakalo ezikhanyayo?
3.1 Imfihlelo yokuqala: Ubhaptizo lukaYesu
3.2 Imfihlakalo yesibini: Umtshato eKhana
3.3 Imfihlakalo Yesithathu: UYesu uxela kwaye avakalise ubukumkani bamazulu
3.4 Imfihlakalo yesine: Ukwenziwa kumila kumbi kweNkosi
3.5 Imfihlakalo yesihlanu: Iziko leSakramente
4 Ithini imithandazo?
4.1 Uphawu loMnqamlezo
4.3 UPadre Nuestro
4.4 I-Ave María
Yintoni iRosari eNgcwele ngoLwesine?
IRosari eNgcwele isetyenziselwa ukubiza uhlobo lomthandazo olwenziwa ngawo onke amaKatolika, kwaye ngendlela efanayo, zizinto ezisetyenziselwa ukuphuhlisa umthandazo omnye. Irosari Unokuhlonipha iimfihlakalo ezahlukeneyo zeNtombikazi kaMariya neyeNkosi yethu uYesu Kristu.
Ukongeza, kumaxesha amaninzi, umzobo okanye umfanekiso onemilinganiselo emi-3 omele ukubethelelwa kukaYesu Krestu ubizwa ngokuba yirosari okanye umnqamlezo. Kude kwafika inkulungwane yesi-XNUMX ukubethelelwa emnqamlezweni ngokucacileyo kwizikhumbuzo zikawonke-wonke, okanye kwizihlandlo ezinqabileyo.
Zithini iimfihlakalo ezikhanyayo?
Iimfihlakalo ezikhanyayo zithathwa njengeyokugqibela kwiRosari eNgcwele, ngaphandle koku, zimele kwaye zicingisisa ngobomi bonke beNkosi yethu uYesu, njengendlela yokubonisa konke asinike kona ngaphandle kokufumana mbuyekezo. Babizwa ngokuba ziMfihlakalo eziKhanyayo kuba zimele ukukhanya kwakhe, yiyo loo nto esithi kwivesi yebhayibhile uJohn 8-12 "Ndilukhanyiselo lwehlabathi." Ezi mfihlakalo ziza emva kokukhankanya iimfihlelo ezizukileyo.
Zithandazwa nini iimfihlakalo ezikhanyayo?
Kuye kwamiselwa yiCawa yamaKatolika ukuba iimfihlakalo ezikhanyayo kufuneka zibuyise ngoLwesine, kuba zonke ezinye iintsuku kufuneka zinxibelelane nezinye iimfihlakalo zerosari.
Kweli candelo iimfihlakalo ezintlanu eziqhekekileyo ezivela kwezi zikhanyayo ziya kukhankanywa.
Ubhaptizo lukaYesu (Mateyu 3, 13-17).
Umtshato eKana (Yohane 2, 1-11).
UYesu uxela kwaye avakalise ubukumkani bamazulu (Marko 1, 14-15).
Ukwenziwa kumila kumbi kweNkosi (Mateyu 17, 1-8).
Ukusekwa kweSakramente (Mateyu 26, 26-29).
Imfihlelo yokuqala: Ubhaptizo lukaYesu
UYesu wabhaptizwa kuMlambo iJordani, ngalo mzuzu izulu lavuleka kwaye uMoya oyiNgcwele wehla ekwimo yehobe. Ilizwi eliphuma ezulwini lalivakala lisithi: "Lo ngunyana wam endimthandayo".
Imfihlakalo yesibini: Umtshato eKhana
Kwakukho umtshato kwidolophu yaseGalili ekuthiwa yiKana, apho kwakukho uMariya oyiNtombi Enyulu, uYesu nonina. Ngaxa lithile yaphela iwayini kwaye uMariya wathi kuYesu: "Abasenayo iwayini"waphendula wathi: "Ixesha lam alikafiki." Emva koko, u Yesu wacela amanzi wawaguqula phambi kwabo bonke abo batshatayo, waba yiwayini.
Imfihlakalo Yesithathu: UYesu uxela kwaye avakalise ubukumkani bamazulu
Ubukumkani bukaThixo bukufuphi, kholwani kwaye nithembele kubo, ixesha lifikile. Umntu ngamnye ubizelwe ukungena ebukumkanini bamazulu.
Imfihlakalo yesine: Ukwenziwa kumila kumbi kweNkosi
Emva kweentsuku ezintandathu, uYesu waya entabeni noPetros, noYohane noYakobi. Okwalo mzuzu uthathe isigqibo sokubonisa ukwenziwa kumila kumbi kwakhe, babenokubona indlela ubuso bukaYesu obakhanya ngayo njengelanga kunye nendlela iimpahla zakhe ezazimhlophe ngayo ngokufanayo.
Bonke, bachukunyiswe koko bakubonileyo, bashiyeka bethe cwaka, ngaphandle kukaPeter, ovumayo ukuba ukuze angene kubuqaqawuli bakhe obungcwele, umntu makanqumle umnqamlezo wabantu baseYerusalem. Apha sishiya ikhonkco ukuze undwendwele iposti ye- Umthandazo wokubulela uThixo.
Imfihlakalo yesihlanu: Iziko leSakramente
Ngexesha lesidlo sikaYesu nabafundi bakhe, wathabatha isonka waza wabulela kuThixo, wabela abafundi bakhe wathi: "Thatha udle wonke umzimba walo ngumzimba wam". Emveni koko waphakamisa ikomityi kwaye ebulela uThixo wayidlulisela kubo bonke, esithi: Sela yonke loo nto kuba ligazi lam, igazi lam eliza kuphalala uxolelo lwezono zakho kunye nokufumana ubomi obungunaphakade.
Imithandazo ephambili ekufuneka yenziwe ukuze uqalise amabali eemfihlakalo ezikhanyayo zezi zilandelayo:
Ndiyakholelwa kuThixo, Bawo,
UMenzi wezulu nomhlaba.
Ndiyakholwa kuYesu Krestu, uNyana okuphela kwakhe,
Owakhe wakhawulwa ngomsebenzi nobabalo loMoya oyiNgcwele;
Wazalelwa kuSanta Maria,
Wabethelelwa emnqamlezweni, wasweleka wangcwatywa,
waza ngomhla wesithathu wavuka kwabafileyo.
Wenyukela ezulwini kwaye uhleli ngasekunene kukaThixo, uYise.
Ndiyakholelwa kuMoya oyiNgcwele
Ubawo wethu osemazulwini,
yiza kuthi ubukumkani bakho.
Ukuthanda kwakhe makwenziwe, emhlabeni nasezulwini.
uxolele zonke izono zethu,
njengokuba nathi sibaxolela abo basonayo,
«UThixo akusindise, Mariya,
Uzele lubabalo, iNkosi inawe.
Usikelelwe wena phakathi kwabafazi bonke, sinentsikelelo nesiqhamo sesizalo sakho, Yesu.
UMariya oyiNgcwele, umama kaThixo,
ngoku nakwilixa lokufa kwethu. Amen ".
Uzuko kuye uYise, nakuNyana, nakuMoya oyiNgcwele.
Njengoko kwakunjalo ekuqaleni, ngoku nangonaphakade, ngonaphakade kanaphakade. Amen ".